Kufunga kusati kwadzikira kubva kuIOS 10 | IPhone nhau
Iyo iOS 10 betas dzakatoenda kuruzhinji. Nezvo, vashandisi vazhinji vasina kumbozviita vanowedzerwa kumisikidzwa kweichi chisina kugadzikana sisitimu yekushandisa. Kune rimwe divi, isu zvakare tine nhamba yakanaka yevashandisi vasingazive mutengo wekubhadhara pakuisa iyo beta yeanoshanda system, saka, isu tinogara tichikurudzira kusaisa beta yeimwe vhezheni yeIOS kana yako iOS chishandiso iyo huru kana iri imwe yematurusi ako ebasa. Tichasiya zvimwe zvekufunga tisati taita kudzikisira kubva kuIOS 10, Nekuti sekunyatso kuziva kwako, kana iwe wakaneta neIOS 10 kana matambudziko ayo ekugadzikana, unogona kugara uchidzokera kune yazvino vhezheni yeIOS iri kusainwa neApple.
Tinofanira kufunga nezvezvimwe zvinhu zvatisingakwanise kukanganwa, chekutanga ndechekuti iBeta, uye nekudaro ichave iine mamwe matambudziko ekuita. Iyo iPad Nhau timu inoisa ese mabheta kuitira kuti vaverengi vazive, asi kazhinji, kushandisa mazwi edu, zvinogona kutaridza kuti beta inoshanda sezvinoitwa yazvino vhezheni vhezheni, kana isingaite. Naizvozvo iwe unofanirwa kutora matanho ekuzvidzivirira usati waamisa. Kana usati, uye izvozvi zvauri kuda kudzoka kubva kuIOS 10 kuenda kune yakaderera vhezheni, chengeta izvi mupfungwa:
Ngwarira backup kopi: Sezvo iwe uchinyatso kuziva, iOS 10 backups haizoenderane neIOS 9, saka unofanirwa kungwarira paunenge uchiita backup, ndiko kuti, unofanirwa kuchengeta backup munzvimbo isingaregedze yako yapfuura iOS 9 backup (yatino Ndinovimba waita usati waisa iOS 10, nekuti ndiyo chete yaunogona kupora zvakare). Izvo zvakati, ini ndinokurudzira kuti iwe ugadzire iyo kopi muTunes.
Zvakanaka kuita a Kuiswa kweIOS 9 kwaperaa, kubva pakutanga, uye gare gare tichadzorera iyo backup kana tichiona zvakakodzera.
Yako iPhone kana iPad inofanirwa kunge iri pamusoro peiyo 50% bhatiri.
Sei kudzokera iOS 9.3 kubva iOS 10
Chinhu chekutanga chatinofanira kuita kurodha pasi yazvino vhezheni yeIOS inoenderana nechinhu icho chatinoda kudzoreredza kana kuita iyo downgrade. Rangu randinofarira peji kurodha pasi apple mobile operating system iri IZVI. Iyo yandinokurudzira, asi kune akati wandei, saka unogona kurodha pasi iOS kubva papeji raunovimba naro zvakanyanya.
Dhawunirodha yako yakasainwa iOS vhezheni yechinhu chakatsigirwa.
Gadzira backup paPC kana Mac apo iOS iri kurodha pasi.
Unganidza yako iOS chishandiso kuPc kana Mac kuburikidza ne USB tambo.
Vhura iTunes uye vhura iyo tabu kune inoenderana kifaa
Sarudza "Dzosera iPad ...»Nembeva uku wakabata pasi« kiyichinhu chose»Panyaya yemacOS, kana iyo« kiyikusuduruka»YeWindows PC.
Iwindo rinovhura, ipapo uchasarudza iyo iOS 9 .ipsw iyo yawakambotora pasi, tinya pa "vhura"
Ipapo kuiswa kunozotanga. Uri kudzoreredza chishandiso kubva pakutanga kuti ubvise dhata inokwenenzverwa kubva kuIOS 10 inogona kukanganisa mashandiro eIOS 10, zvirinani ndiyo nzira yakachengeteka uye iyo yatinokurudzira kubva pano. Kana ukangotanga chigadzirwa chako, ichakukumbira kuti uitesezvo ichizobatanidzwa kune imwe Apple ID. Kana tapedza maitiro ekugadzirisa zvinotikumbira kuti tidzorere backup kana tichida, chenjera kusarudza yekupedzisira kubva kuIOS 9 uye kwete iyo yawakaita kuIOS 10 (kana wakazviita), nekuti iyo yekupedzisira ichaita kwete kuenderana.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Kufunga kusati kwadzikira kubva kuIOS 10
Tambo dzeNylon dzeApple Watch pasi pe € 20